Home Wararka Sheeko iyo Shaah: Hogaamiye Kheyr Wada Allah Farta ha Noogu Fiiqo Doorkaan.
Sheeko iyo Shaah: Hogaamiye Kheyr Wada Allah Farta ha Noogu Fiiqo Doorkaan.
Deerow: Hadda wixii la sugaaba doorashadii waa dhamaad, waxaana la dooran doonaa Mdaxdweyne cusub, laakiin waa yaabe 39 qof see loo kala saaraa?
Ugaaska: Horta badankood waa boos celiskii xelligii Kacaanka oo raashinka saf loo gei jiray dad ayaa dhagax sii dhigan jiray boos celis ahaan. Hadda waxay rabaan inay wasiirro laga dhigo oo ay laba ama seddex qof ay helaan ay ku badashaan mansab.
Dhuuxaaye: Aniga waxaa ii muuqata musiibo weyn oo tii hore ka daran?
Deerow: Haye soo deyhee shartaada Allah ha na mootiyee.
Dhuuxaaye: Hadda waxaa kurisga madaxdweyne ku fadhiya Farmajo oo waqtigiisa dhamaaday, marka la iska dhaafo maamulxumo, hogaanxumo iyo shaqoxumo waxaa ka darn eexda uu u sameeyey qabiilkiisa. Gedo waxay si nabad ah uga tirsanaayeen Jubaland waa ka gooyey hub iyo ciidan ayuu ku daldalay maanta waa ka hub badan yihiin K/Galbeed iyo Jubbaland marka haddii uu soo noqdo maxaa dhacaya? Haddii uu mid kale oo dowlad goboleedyadaas ka yimid uu madaxdweyne noo noqdo ma dhaceysoo inuu gobolkiisa u eexdo sida kan oo kale?
Ugaaska: Wallaahi waa runtaa annaga kamaba aynaan fekerin taas. Haddii uu Deni yimaado xataa sow ma dhaceyso inay Puntland uu wax waliba ka hormariyo, hadduu Madoobe yimaado waa la mid.
Qawdhan: Waar annaga waa inoo dhammatay haddii uu Deni yimaado oo Sool iyo Sanaag ayeyba nooga bilaabaneysaa.
Deerow: Adinka kaliya maaha haddii uu madaxdweyne noqdo qof Maamul goboleedkiisa u eexanaya mar kalaa sidii Farmajo ka daran loo jabaa.
Qowdhan: Waar yaadhahee gari Alley taqaane ninmankaa Hawiye ee iska daba yaacaya dalkaan looma dhaama, laakiin iyagana waxaa haysata doqoniimo oo dhamaantood shaqo aan Madaxdweynenimo ahayn uma muuqato.
Ugaaska: Alle lehe Qwdhanow run baad sheegtay oo dalkaan looma dhaamo, inkastoo ragga qaar ay yihiin kuwa uu afku weynaaday oo dhaca u haliilaya sida Xasan Kheyre.
Deerow: Kheyre waa la ogyahay inuu yahay ciddii Farmajo u fududeysay dembi kasta oo uu galay, kuwa bandanna uu gacabtiisa ku galay sida dhiibistii Qalbidhagax iyo Dilkii Ikraan oo la hubo inuu wax badan ka ogyahay. Marka kaas cidi dooran meyso.
Ugaaska: Waa run oo waa qofkaad sheegatay aniga tariiikhdiisa ayaan kuu aqaan oo marka laga soo bilaa NRC oo lagu soo xejiyo NIS oo ahaa laba hay’adood oo ay Norway Maalgelisay iyo SOMA Oil oo wax badan magaceeda uu ku dhacay ayaa waxaan cabsi ka qabaa inuu lacag badan oo laaluush ku indha sarcaadiyo dhallinyarada cusub ee barlamaanka.
Qawdhan: Waa dadka hadda soo baxay ha yareysanina waxaa ku jira dhallinyaro dalkaan oo mustaqbal dheer ku leh dalka ,, kuwsoo tecnolojiyada casriga wax ku kala miisaanta; Facebook, Snapchat, Tik Tok iwm ayey ku haminayaan marka laguma siri karo xogaa yar maalmaha doorashada la siiyo dalkaan waxay uga fekerayaan si mustaqbal leh mana ku kadsoomi doonaan xoogaa marka hore la siiyo kadibna loogu abaal sheegto oo xataa marka awoodda la helo looga eryo Meesha. Kheyrana waxay ka arkeen Facebook isagoo askari miskiin ah oo qorrax fadhiya ku leh “ka saara Meesha haddii uusan R/wasaarihiisa oo hadlayaa uusan dhageysaneynin”.
Dhuuxaaye : Marka ma waxay ka cabsanayaan Xildhibaanka ka saara Barlamanka haddii uusan Madaxweynihiisa amarkiisa qaadaneyn oo u codeyneynin sida uu rabo Madaxdweynaha?
Ugaaska: Kuu cadaa hee maa taasaa mugdi ka joogaa inuu Kheyre Sameynayo.
Deerow: Waa la hubaa kheyre inuu Sameyn doono wax ka xun wixii uu Farmajo sameeyey waayo qof isla weyn, iimaan daran oo haddana qabili ah. Fiiri xoolihiisa Ismaciil Goonni, Cabdikariin Gaambe iyo Caasha Shaacuur ayaa haya.
Ugaaska: Somalida qabiil kama dhamaato laakiin waa na soo mareen hogaamiyeyaal qabiilka ka korsan oo aaminsan in waxa qaranka u wanaagsan uu qabiilkoodana u wanaagsan yahay sida dalka haddii uu noqdo dal ku shaqeeya shuruucda u qoran cid waliba ayey dani ugu jirtaa oo wax noqon karta.
Deerow: Hadlkaas waa sax lakiin aniga waxaan cabsi ka qabaa marka uu yimaado mid ka socda dowlad qoboleed ama qabiil weyn oo maamulk goboleedyada u kale eexda sida haddii uu yimaado mid ka socda K/Galbeed oo yiraahda iyadaan horumarinayaa marka hore ama Puntland waa hooyadii Federaalka waa in si gaar ah loo texgeliyaa oo lama sameyn karo wax aysan raalli ka ahayn.
Qowdhan: Waar annaga is riixriixiinna ayaa noo dan ah oo Citiraaf ayaa dhaqso u heleynaa haddii aad doorataan mid idin sii kala fogeeye weliba mid reer Puntland ah oo xabadda ugu horreysa nagu soo ridaya maalinta uu awood yeesho.
Ugaaska: Dalkaan odayaasha Hawiye ee waxgalka ah, waxgaradka ah, hogaaminta leh, ummadana u diirnaxaya mid nooga soo qabta ayaan leenahay barlamanka cusub iyo dhallinyarada mustaqbalka leh, laakiin waa inuu xelligaann dalka hogaamin karaa oo waa inuusan noqon mid xoog iyo dagaal wax ku raadinaya iyo mid khibrad yar balse isu arka inu yahay biyo kama dhibcaan, mid damac waalan oo qofeed la duulaya, iyo mid lacag wax ku rabo si uu dalka lacag uga sameeyo.
Deerow: Wallaahi waa runtaa ee Eebaheen aan tuugno inuu mid kheyr qaba oo isku kaaya wadi kara, boogaha dhayi kara, bulshada u naxa inuu rabbi noo keeno.
Qawdhan: Haddii aad kaas heshaan midkaas wanaagsan hadda annaga daleesha iyo citiraaf raadi nagu wareerinaya maan idin la hadllo oo aan idinka qaadanno cad buuran oo shilis ah.
Deerow: Duq Dhuuxaaye ma afkiibaa juuqda gabay? Maxaa ku aamusiiyey.
Dhuuxaaye: waxaan sheegaba ma aqaan, laakiin Ugaaska ayaa hadalkii wanaagsanaa sheegay.
Ugaaska : Mid kheyr wade Allah farta ha noogu fiiqo doorkan annaggana aan ku towfiqno aamiin inoo dhaha.
Dhuuxaaye, Ugaaska, Qawdhan iyo Deerow : Aamiin
Previous article(Xog) Qaar kamida Musharaxiinta Madaxweyne oo iyagana mari doona wadada Fahad Yasin?
Next articleGuddoomiyihii hore ee Degmada Yaaqshiid oo Maxkamad looga yeeray in Qandaraas lagu heysto
Farmaajo oo waqti kororsi sameenayo iyo Dastuurka oo la doonayo in...
MW Lafta Garreen oo soo gaaray Muqdisho